Koob lagu xusayay sanadguurada Warbaahinta Qaranka oo loo dhigay Kooxaha Heegan iyo Gaadiidka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Koob lagu xusayay sanadguurada Warbaahinta Qaranka oo loo dhigay Kooxaha Heegan iyo Gaadiidka “SAWIRRO”
in Ciyaaraha, Wararka, Xulashada
Cayaartan lagu maamuusayay sanad guurada Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed isla markaana ka mid aheyd horyaalka dalka ayaa waxa uu maanta garoonka kubada cagta ee Banaadir Stadium ku dhex martay kooxaha kubada cagta ah ee Heegan iyo Gaadiidka, iyadoo ay ku tartamayeen koob ay u dhigtay Warbaahinta Qaranka.
Madaxda Warbaahinta Qaranka, qaar ka mid ah taageerayaasha labada kooxood iyo dadweyne aad u fara badan ayaa buux dhaafiyay garoonka, iyadoo jawiga garoonkana uu aad uga duwanaa sidii hore.
Cayaartoyda labada kooxood oo diyaar balaaran uu ka muuqday ayaa markii ay bilaabatay cayaarta, waxa ay labada koox soo bandhigeen cayaar aad u wanaagsan oo ay u riyaaqeen dhamaan dadkii u soo daawasho tegay kulankii maanta, waxaana cayaarta guud ahaan ku soo idlaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Heegan.
Kabtanka kooxda Heegan Cabdikariin Abuukar Nuur oo cayaarta markii ay soo gaba gaboowday kaddib la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa guusha ay maanta gaareen ku tilmaameen inay tahay mid taariikhi ah, maadaama ay bar bar socotay koob lagu maamuusayay sanad guurada Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed.
Gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali-shiine Cabdi Maxamed ayaa hambalyo u diray Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, isagoo howlwadeenada ku bogaadiyay inay sii labo jibaaraan howlaha ay bulshada u hayaan
Agaasimaha Radio Muqdisho C/raxiin Ciise Caddow ayaa u hambalyeeyay kooxda kubadda cagta ee Heegan, guusha ay maanta gaareen, isagoo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta uga mahadceliyay qabsoomidda kulanka.
Agaasimaha Warbaahinta Qaranka Mudane C/raxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala ayaa hoosta ka xariiqay in wada shaqeyn buuxdo ay kala dhexeyso Warbaahinta Qaranka iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, waxaana uu intaa ku daray inay xoojin doonaan ka shaqeynta Nabadda iyo isdhexgalka bulshada.
Cayaarta galabta dhex martay labada kooxood ee Heegan iyo Gaadiidka ayaa qeyb ka aheyd dabaal dega xuska sanad guurada Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, iyadoo dhinaca kalena daawadayaasha cayaarta hamlayo u direen Warbaahinta Qaranka.
Kulan looga hadlayay horumarinta Afka Hooyo oo lagu qabtay Muqdisho